I-UI enye: ujongano olutsha lweSamsung noyilo olutsha | I-Androidsis
Le nkomfa yonjiniyela ehlelwe yiSamsung ayisishiyanga kuphela ukwazisa ifowuni yakho yeflip. Ukutyikitywa kusishiya nolunye uhlobo olutsha, oluza ngohlobo lojongano. Ukusukela inkampani yaseKorea izise ngokusesikweni i-UI enye, ujongano lwayo olutsha nolwenziwe ngokutsha. Ngumlandeli kumava eSamsung, ngoku eza ngoku isekwe kwiPie ye-Android. Ukuvuselelwa kwenkampani kule ndawo.
Olu nxibelelwano lutsha oluvela kwi-Samsung lubalasele ngemiba embalwa. Inye ye-UI ineempawu zokuyila ezicocekileyo kwaye kuya kuba lula ukuyisebenzisa kubo bonke abo banefowuni yohlobo. Ke olu lutshintsho olukhulu kwinkampani.
Njengoko inkampani ivakalisile kule ntetho, i-UI enye yazalwa inombono yenza lula imisebenzi esiyisebenzisayo kwi-smartphone yethu. Ukuze ukusetyenziswa komnxeba kube lula kakhulu kuthi, kodwa konke oku ngaphandle kokuphulukana nokukhetha ekusetyenzisweni kwayo. Ke asilahli ukhetho okanye imisebenzi, kodwa ukufikelela kuyo kuya kwenziwa.
1 I-UI enye: Ujongano oluza kutshintsha
I-UI enye: Ujongano oluza kutshintsha
Inokuba yeyona nto itsala umdla omkhulu ekuqaleni kwale interface Samsung. Lujongano oluguqukayo, eza kunika amathuba amaninzi. Oku kunokufezekiswa ngeendlela ezimbini, kuba kwicala elinye kuya kubakho ukudibanisa ukhetho loqwalaselo. Kwelinye icala, sinethuba lokwenza izinto esingazidingiyo ukuba zinyamalale.
Enye ye-UI iya kuba sisinxibelelanisi esitshintsha rhoqo. Xa umsebenzisi engazifuni izinto ezithile, baya kususwa. Isitshixo kukuba ijolise kwinto ayenzayo umsebenzisi ngalo mzuzu, ukunqanda nakuphi na ukuphazamiseka okwangoku. Ukugxila kwimisebenzi yenye yeemotto zakhe.
Enye into ekufuneka siyikhankanye yile ujongano kunye nokusetyenziswa zihlelwe ngokutsha. Ngoku, ziqhelana ngcono nendlela esisebenzisa ngayo iselfowuni. Inxalenye ephezulu yeapps sinokubona umxholo kunye nenxalenye esezantsi yefowuni ukuze sikwazi ukusebenzisana. Into enengqiqo, kuba icandelo elisezantsi kulapho sihlala sinomnwe xa sithatha iselfowuni ngesandla esinye.
Isamsung ibonakalisile ukuba imiyalezo yemiyalezo iya kuba njani kwi-UI entsha, njengoko ubona kumfanekiso ongentla. Izakubonisa kuphela kwinxalenye ephezulu, ngelixa elisezantsi siza kuba nakho ukudlulisa uluhlu lwemiyalezo, phakathi kwezinye izinto okanye imisebenzi. Umbono kukuba ukusetyenziswa kwezicelo zabasebenzisi kunomdla ngakumbi.
Iimenyu kwifowuni okanye kwii-aplikeshini ziya kuboniswa emazantsi kwesikrini.. Kule meko, onke amamenyu afakiwe, njengemenyu yentsingiselo xa usenza ukhetho, oluhlala luvela emazantsi kwesikrini. Iya kuhlala ingezantsi, nokuba kusezantsi ngoku.
Iindaba ezimnandi zabasebenzisi kukuba i-UI enye iya kuyo nika ukhetho olwaneleyo lokwenza ngokwezifiso. Isamsung ilithathele ingqalelo eli candelo ujongano. Siza kuba nakho ukutshintsha umbala we-interface ngendlela elula, njengoko inkampani ibonakalisile bukhoma kwinkomfa. Ke inokuhlengahlengiswa ngokuxhomekeke ekusebenziseni esikwenzayo.
Imowudi emnyama iza ngokwendalo kwi-UI enye, njengoko kubonisiwe kumsitho. Singayisebenzisa le ndlela imnyama, ukuze usetyenziso lwefowuni lwamkele iithowuni ezingwevu okanye ezimnyama. Yindlela emnyama kwinqanaba lojongano, echaphazela ujongano lonke.
Njengoko iqinisekisiwe yiSamsung, I-UI enye iya kuphehlelela ngoJanuwari 2019 kwezinye zeefowuni zayo. I-Galaxy S9, S9 + kunye neGalaxy Note 9 ziya kuyifumana kule nyanga. Phambi koku, inkampani kungekudala iza kuqala ixesha lokulingwa kwezinye iimarike. Okwangoku, iJamani, iJapan kunye ne-United States ziye zaqinisekiswa malunga noku, nangona iimvavanyo ziya kwenziwa kumazwe amaninzi aseYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » I-UI enye: ujongano olutsha lweSamsung